:: My Little World ::: ဖျက်သိမ်းရမည့် လူမှု့ ရေး အသင်းများ
Posted by Nay Nay Naing at 5/18/2007 02:09:00 PM
Military regimes are so stupid.just stupid..too much stupid that i cant even think of how to describe them.
Saturday, May 19, 2007 4:08:00 AM
တော်တော်ကြီးကို အဓိပ္ပာယ် မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ..
Saturday, May 19, 2007 10:27:00 PM
ခုတောင် ရဲတပ်ဖွဲတွေ့ နဲ့ တခြားအစိုးရဌာနတွေမှာ နာရေးကူညီမှု့ အသင်းတွေ ဖွဲ့ ခိုင်းနေတယ်လို့DVB မှာရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ http://burmese.dvb.no/news.php?id=765
Tuesday, May 22, 2007 2:08:00 PM
စိတ်မကောင်းရုံကလွဲရင် ဘာ ဘာ ဘာမှ မတတ်နိုင် လက်မှိုင်ချ ငိုင်တွေရုံမှတပါး အခြားမရှိ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါရင် ဒင်းတို့တွေ စိစိညက်ညက်ကြေပါစေ
Thursday, May 24, 2007 12:02:00 PM
kway ma thar tway...
myanmar ppl's lives r so fucked up.
Monday, May 28, 2007 12:11:00 AM
မဟုတ်ဘူး အဲဒါမှားနေကြတာဗျ။ သူက စာရွက်စာတန်းမစုံတဲ့ အသင်းတွေကို နှစ်တိုင်အဲဒီလို ထုတ်ပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် လူသိပ်မသိဘူး။ ဒီနှစ်သိသွားကြတယ်ဆိုတာက သတင်းထောက်တွေလက်ထဲကို မိတ္တူတွေရောက်သွားရာက ပွသွား
Monday, May 28, 2007 8:27:00 PM
Ko Mg Mg said...
ကိုစိုးဇေယျ ပြောတာဆို 'ီအသ်ငးကြီးတွေက စာရွက်စာတမ်းမစုံဘူးပေါ့။ စာရါက်စုံအောင် မလုပ်နိုင်ကြဘူးပေါ့။ စာရါက်ထဲမှာ တိုင်းထောက်ခံချက်လိုတာကို ပြောချင်တာလာ်းဗျ။ ဘာက မှားနေတာလဲ နဲနဲပြောပြပါလား။
Tuesday, May 29, 2007 4:57:00 AM
အထက်ပါ ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ အဆိုပါအသင်း ၂၄ သင်းဟာ တိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေး ကောင်စီမှ ဆက်လက်ဖွဲ့ စည်းရန် ထောက်ခံခြင်းမရှိပါသဖြင့် ဖွဲ့ စည်းခွင့်မပြုဟု ပါရှိပါသည်။ ဒီတော့က အဆိုပါအသင်းများသည် စာရွက်စာတမ်း မစုံလင်ဘူးဆိုတာထက် တိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ ဖြိုးရေး ကောင်စီ ခွင့်ပြုချက် မရသဖြင့် ဖွဲ့ စည်းခွင့် မပြုဆိုသည်မှာ အလွန်တရာ ထင်ရှားပါသည်။ ဒီတော့ ကို Soe Zeya က အဆိုပါ အသင်းတွေဟာ စာရွက်စာတမ်းမစုံလင်ဘူး နှစ်တိုင်း ဒီလိုထုတ်ပြန်ပြီးပိတ်လေ့ရှိတယ်လို့ဆိုထားသဖြင့် တိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေး ကောင်စီက ခွင့်ပြုချက်မရလို့စာရွက်စာတမ်း မစုံလင်တဲ့ အသင်းတွေကို ခုလို ဖွဲ့ စည်းခွင့် ရုပ်သိမ်းတာဟာ မှန်တယ်လို ခင်ဗျားက ဆိုလိုချင်ပါသလား။
"ဒီနှစ်သိသွားကြတယ်ဆိုတာက သတင်းထောက်တွေလက်ထဲကို မိတ္တူတွေရောက်သွားရာက ပွသွား" ဟု့ လည်း ခင်ဗျားက ဆိုထားသဖြင့် သတင်းထောက်တွေ ဒီကိစ္စကို အခုလို သတင်းဖြန့် ချီတာ မှားတယ်လို့ ကော ခင်ဗျားက ဆိုလို ပါသလား။ အစိုးရ ဌာန တစ်ခု အနေနဲ့ဘယ်လို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းတယ်၊ ဖွဲ့ စည်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကို အများပြည်သူ သိရှိအောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိတိကျကျ သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်ရေးလွှတ်ဝှက်ချက် မဟုတ်ပါ။ ခင်ဗျားရဲ့ အရေးအသားက ဒီလို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ အစိုးရ ကျေညာချက်တွေကို ထောက်ခံပြီး ၊ ဒါကို သတင်းရအောင် လိုက်ပြီး ရေးသားတဲ့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်က မှားတယ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ပေါက်နေပါသည်။